Imbali kunye neNkcubeko EMexico naseNyakatho Melika
UMongameli waseMexico okhethiweyo ngo-2012
U-Enrique Peña Nieto (ngoJulayi 20, 1966-) ngummeli waseMexico kunye nezopolitiko. Ilungu le-PRI (i-Institutional Revolutionary Party), wakhethwa nguMongameli waseMexico ngo-2012 ngekota eliyiminyaka emithandathu. Umongameli uvumelekile kuphela ukuba asebenze elinye ixesha.
Uyise kaPeña, uSeveriano Peña, wayeyidolophu yedolophu yaseAcambay kuMbuso waseMexico, kunye nezinye izalamane ziye zahlala kwezopolitiko.
Watshata noMónica Pretelini ngo-1993: wafa ngokuzumayo ngo-2007, wamshiya abantwana abathathu. Watshata kwakhona ngo-2010 kwi-"fairytale" yomtshato kwi-telenovelas yaseMexico yaseNyerican Rivera. Wayenomntwana ngaphandle komtshato ngo-2005. Ingqalelo yakhe kulo mntwana (okanye ukungabi naso) kuye kwaba yinto ephikisayo.
U-Enrique Peña Nieto waqala ukuqala emsebenzini wakhe wezopolitiko. Wayengumququzeleli womphakathi ngelixa eseneminyaka engama-20 ubudala kwaye uye wagcina ubukho kwezopolitiko ukususela ngelo xesha. Ngo-1999, wasebenza kwiqela leqela le-Arturo Montiel Rojas, owanyulwa kwiRhulumente waseMexico. UMontiel wamvuza ngesikhundla soNobhala woLawulo. U-Peña Nieto wakhethwa ukuba athathe isikhundla sikaMonel ngo-2005 njengoGavana waseMexico State, ekhonza ukususela ngo-2005-2011. Ngo-2011 wanqoba ukutyunjwa kwe-PRI kaMongameli waza wabuya waba ngumgijimi wangaphambili kunyaka-2012.
2012 Ukhetho loMongameli
I-Peña yayingumlawuli ogqirha kakhulu: wayedlulisele imisebenzi ephakamileyo yoluntu kuMbuso waseMexico ngexesha lokulawula kwakhe.
Ukuthandwa kwakhe, ukudibanisa nekhenkethi yakhe yenkwenkwezi, iyenze ibe yintando yakhe yokuqala. Abachasi bakhe abakhulu bashiya i-Andres Manuel uLópez Obrador weCawa yeDemocratic Revolution kunye noJosefina Vázquez Mota we-National Action Party. I-Peña yagijimela kwinqanaba lokhuseleko kunye nokukhula koqoqosho kwaye yanqoba idumela lakhe lexesha elidlulileyo lenkohlakalo ekuphumeleleni ukhetho.
Ukuguqulwa kwerekhodi ngamaphesenti angama-63 abavoti abavumelekileyo bakhetha iPeña (iipesenti ezingama-38 zevoti) ngaphezu kweLópez Obrador (iipesenti ezingama-32) kunye neVázquez (iipesenti ezingama-25). Amaqela aphikisayo athetha ukuphulwa kwamaphulo athile nge-PRI, kubandakanywa ukuthenga ukuvota nokufumana ukunyuswa kweendaba, kodwa iziphumo zema. I-Peña yathatha isikhundla ngomhla wama-Dec 1, 2012, esikhundleni sikaMongameli ophumayo uFelipe Calderón .
Nangona wayekhethwa ngokulula kwaye iipolulwazi zibonisa ukuba ulungiso olufanelekileyo lweemvume, abanye bafumana uPeña Nieto ukuba nzima ukuba ufunde. Enye yeengqungquthela zakhe ezibalaseleyo zifikelele kwincwadana enobulungisa, apho wayebiza ngokuba ngumdlali omkhulu wencwadi ethi "I-Aagle's Terrone" kodwa xa ucinezelekanga ayikwazi ukubiza igama lo mbhali. Le nto yayiyinto ephosakeleyo ngenxa yokuba le ncwadi yabhalwa nguCarlos Fuentes ohloniphekileyo, enye yeengcali zamanqaku ezidumileyo eMexico. Abanye bafumanisa uPeña Nieto ukuba abe yi-robotic kwaye adibanise kakhulu. Ngokuqhelekileyo uthelekiswa nompolitiki waseMerika uJohn Edwards (kwaye kungekho ngendlela efanelekileyo). Ingcamango (echanekileyo okanye ayikho) ukuba ihembe eligxibileyo iphakamisa iingxaki ngenxa yeqela le-PRI eliqhayisa ngokudlulileyo.
Ngo-Agasti 2016, wayenomlinganiselo ophantsi kakhulu wokuvunyelwa kwanoma yimuphi umongameli ekubeni ukuvota kwaqala ngowama-1995. Baye batyalela ngaphezu kweepesenti ezingama-12 xa amaxabiso egesi aphakama ngoJanuwari 2017.
Iingxaki zoLawulo lwePeña Nieto
UMongameli uPeña wathatha ulawulo eMexico ngexesha lokuxhalabisa. Enye inselele enkulu yayilwa namakhosi amachiza alawula amaninzi eMexico. Amakhansela anamandla nemikhosi yangasese yamajoni obuchwepheshe enza amabhiliyoni athengisa iziyobisi kunyaka ngamnye. Banobuqili kwaye abaxhatshazi ukubulala amapolisa, abagwebi, intatheli, abapolitiki okanye nabani na owenza umngeni. UFelipe Calderón, owayengumongameli wePeña njengoMongameli, wachaza yonke imfazwe kwiinqwelo zokukhwela, ukukhaba phezu kwidleke lokufa kunye ne-orm.
Uqoqosho lwamaMexico lwaluthatyathwa kakhulu ngexesha loxinzelelo lwamazwe ngamazwe ngo-2009, kwaye nangona luya kuphulukana, uqoqosho lubaluleke kakhulu kubavoti baseMexico. UMongameli uPeña unobungane kunye ne-USA kwaye uye wathi ufuna ukugcina nokuqinisa ubudlelwane bezoqoqosho nommelwane wakhe ngasentla.
U-Peña Nieto uye waba nerekhodi edibeneyo. Ngethuba lokuhlala kwakhe, amapolisa ayifumene nenkosi yezilwanyana eyaziwayo kakhulu, uJoaquin "El Chapo" uGuzman, kodwa uGuyman wasinda entolongweni kungekudala emva koko. Oku kwakuyintloni enkulu kumongameli. Okubi nakakhulu kukuba ukunyamalala kwabafundi abangama-43 beekholeji kufuphi nedolophu yase-Iguala ngoSeptemba 2014: bacinga ukuba bafile ezandleni zeenqwelo.
Imingeni eqhubekayo eyenziwa ngexesha lophulo kunye nokonyulwa kukaDonald Trump eUnited States. Ngemigaqo yokuvakalisa udonga lwasemdeni ohlawulwa yiMexico, ubudlelwane nommelwane waseMexico wasekumantla bathatha ithuba lokubi.
> Puente, Teresa. UMongameli waseTexico oMexico: I-Saga ka-Enrique Peña Nieto yeScandal, iGaffes kunye ne-Connections
> Univision Noticias. Biografía de Enrique Peña Nieto
> Wilkinson, Tracy noKen Ellingwood (eLos Angeles Times). U-Enrique Peña Nieto waseMexico, indoda eyimfihlakalo
> Seelke, Clare Ribando. Ukhetho lukaMexico luka-2012. INkonzo yoPhando lweCongressal.
Ukunqotshwa kobukhosi baseAztec
Ibhataliyali likaStatrick Patrick
IMfazwe yaseMexico naseMelika: Imiphumo yoLwaphulo
INkundla ePhakamileyo inokubopha iiVotes zingabandakanyeka njani iingxaki ezinkulu
Isishwankathelo 'somfanekiso womPristi: Abafazi kunye neSithethe kwiGrike lasendulo'
5 Ukunwabela Ngeentambo Zokunyuka
Indawo ka-Amygdala kunye neMisebenzi kwiBrain
Iilwimi zesiTaliyane: I-Porre